Dr. Tint Swe's Writings: Cancer writings in my Blog ကင်ဆာကို စာနဲ့သတ်မယ်
ဆရာ ကျွန်မက အသက် ၃၀ အိမ်ထောင်ရှိပြီး ကလေးမရှိပါ ဘာရောဂါမှ ထွေထွေထူးထူးမရှိပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေ ကြားနေရတဲ့ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်မှာတော့ ကြောက်ပါတယ်ရှင့် fast food နဲ့ coffee mix အပြင်စာတွေရှောင်နေတာတော့ ကြာပါပြီ ကျွန်မသိချင်တာက ကင်ဆာကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ သင်္ဘောရွက် ပန်းမုန့်လာအစိမ်း ထောပတ်သီး မုန်လာဥနီ တွေပုံမှန် စားသောက်ပေးရင် တကယ်ပဲ ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ပါသလားရှင့် ဂျုံမြက်နုအကြောင်းလေ့လာကြည့်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတာ တွေ့ရပါတယ် တကယ်ပဲ အထက်က အစားအသောက်တွေစားရင် ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ပါသလားရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
နတ်ဆေးလို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ ကင်ဆာအမျိုးမျိုး ပျောက်တဲ့ဆေးတဲ့။ နင်လားဟဲ့ ကင်ဆာ အဖိတ်စင်မရှိ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး (အစ မှ အဆုံး တိတိကျကျသေသေချာချာဖတ်ပါ) တဲ့။ ကြော်ငြာဆေး မေးကြတယ်။ ဆေးမှာ ဒေါက်တာ ဘယ်သူဘယ်ဝါအမည်ပါ ထည့်ထားတယ်။ ဗမာပြည်သာမက ထိုင်းက ဒေါက်တာဆိုသူအမည်နဲ့ ရောင်းနေတာတွေ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကတော့ မသုံး။ ရွှေဗမာတွေကို အမဲဖမ်းနေတာ။ ဝယ်လိုက်ကြတာ မေးခွန်းတွေအရ သိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါက်တာဆိုရင် နာမည်ပျက်များတယ်။
ကင်ဆာတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ မသိသေးတာကများတယ်။ ဆေးလိပ်နဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ လိင်လမ်းကြွက်နို့နဲ့ သားအိမ်ဝကင်ဆာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ အသည်းရောင် ဘီ + စီ နဲ့ အသည်းကင်ဆာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ တခြား ခိုင်မာမှုအကြောင်းတရား မရှိပါ။ မိသားစုလိုက်တာတချို့ရှိတယ်။ ကံတရားလို့ပြောရင် မမှား။
1. 10 Warning Signs of Lung Cancer http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/10-warning-signs-of-lung-cancer.html
2. Aspirin significantly cuts cancer rates အက်စ်ပရင်ဆေးကနေ ကင်ဆာသေနှုန်းနည်းစေတယ်
3. Best practice guidelines released for cervical cancer screening သားအိမ်ဝကင်ဆာ ဆန်ခါတင်စစ်ဆေးမှု အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်လမ်းညွှန်
4. Bladder Cancer ဆီးအိမ်-ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/bladder-cancer.html
5. Bowel cancers spotted too late http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/gastric-cancer.html
6. Bras and Breast Cancer (ဘရာစီယာ) နဲ့ (ဘရက်စ်) ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/bras-and-breast-cancer.html
7. Breast Cancer (1) ရင်သား-ကင်ဆာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/breast-cancer-1.html
8. Breast Cancer (2) ရင်သားကင်ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/breast-cancer-2_5.html
9. Breast Cancer Chemotherapy ရင်သား-ကင်ဆာကို ဆေးပေးကုသခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/breast-cancer-chemotherapy_5.html
10. Breast Cancer Risk ရင်သားကင်ဆာ အန္တရာယ်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/breast-cancer-risk.html
11. Breast Cancer Today ရင်သား-ကင်ဆာ အရင်ကနဲ့မတူပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/breast-cancer-today.html
12. Breast Cancer Treatment regimes ရင်သား-ကင်ဆာ ကုထုံးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/breast-cancer-treatment-regimes.html
13. Breast Conditions ရင်သား ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/family-history-of-cancer.html
14. Breast-feeding cuts moms’ risk of breast cancer နို့တိုက်မိခင်များ ရင်သားကင်ဆာအဖြစ်နည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/breast-feeding-cuts-moms-risk-of-breast.html
15. Breath test could give clues to stomach cancer risk http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/breath-test-could-give-clues-to-stomach.html
16. Cancer 12 Facts သိသင့်သော ကင်ဆာ အချက် ၁၂ ချက်
17. Cancer and Diet ကင်ဆာ နဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cancer-and-diet.html
18. Cancer death rate declines worldwide ကင်ဆာကြောင့်သေနှုန်းကျဆင်းလာ
19. Cancer drug combination shrinks 60% of melanomas http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cancer-drug-combination-shrinks-60-of.html
20. Cancer drug shows promise as cure for hepatitis B
21. Cancer links ကင်ဆာစာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cancer-links.html
22. Cancer of the Uterus သားအိမ်-ကင်ဆာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/06/cancer-of-uterus.html
23. Cancer study pinpoints 8 signs death is nigh http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/insecticide-lindane-causes-cancer.html
24. Cancer Symptoms for Men ယောက်ျား-ကင်ဆာ လက္ခဏာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/colorectal-cancer.html
25. Cancer tests ကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း လမ်းညွှန်သစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/cancer-tests.html
26. Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာ အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cancer-fighting-foods_5.html
27. Cancers of Women Reproductive system အမျိုးသမီး မျိုးပွါးလမ်းမယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cancers-of-women-reproductive-system_5.html
28. Cervarix (HPV vaccine) သားအိမ်ဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cervarix.html
29. Cervical Cancer (1) သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-1_24.html
30. Cervical Cancer (2) သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-2.html
31. Cervical Cancer (3) သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-3_5.html
32. Cervical cancer in virgins သားအိမ်ဝကင်ဆာနဲ့ အပျို https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/cervical-cancer-in-virgins.html
33. Cervical Cancer New Guidelines သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဆေးစစ်ခြင်း အသစ်ပြဌာန်းချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-new-guidelines.html
34. Cervical cancer test DIY သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာကို ကိုယ့်ဖါသာ စမ်းသပ်နည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-test-diy.html
35. Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) သားအိမ်ဝ ရောဂါတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cervical-intraepithelial-neoplasia-cin.html
36. Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/cancer-symptoms-for-men.html
37. Disclosure of the cancer diagnosis ကင်ဆာလို့ ဘယ်သူ့ကိုပြောရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/disclosure-of-cancer-diagnosis.html
38. Do's and Don'ts to Reduce Your Risk of Cancer ကင်ဆာအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး
39. Esophageal cancer အစာမြိုပြွန်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/esophageal-cancer.html
40. Family Cancer Syndromes မိသားစု ကင်ဆာ ဆင်ဒရုမ်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/family-cancer-syndromes.html
41. Family History of Cancer ကင်ဆာမိသားစုရာဇဝင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/breast-conditions.html
42. Gallbladder cancer သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/gallbladder-cancer.html
43. Gastric cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/bowel-cancers-spotted-too-late.html
44. Google is developing cancer and heart attack detector ဂူဂယ်လ်ကနေ ကင်ဆာစမ်းသပ်စရာတီထွင်နေ
45. Heart Cancer နှလုံးကင်ဆာ ဘာလို့မဖြစ်တာလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/heart-cancer.html
46. HIFU ကင်ဆာကုသဘို့ရာ ရန်ကုန်မှာစက်သစ်ဖွင့်ပြီတဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/hifu.html
47. HIV flushed out by cancer drug https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/hiv-flushed-out-by-cancer-drug.html
48. Hormone therapy and breast cancer ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဟော်မုန်းဆေး
49. Hormone therapy and breast cancer ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဟော်မုန်းဆေးကုသနည်း ဆန်းစစ်ချက်အသစ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/hormone-therapy-and-breast-cancer.html
50. HPV Vaccine for Ca Cx သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hpv-vaccine-for-ca-cx.html
51. Insecticide Lindane causes cancer http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/cancer-study-pinpoints-8-signs-death-is.html
52. Invasive ductal carcinoma http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/invasive-ductal-carcinoma.html
53. Liver cancer early detection အသည်းကင်ဆာ စောစောဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/liver-cancer-early-detection.html
54. Lung Cancer (1) အဆုပ် ကင်ဆာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/lung-cancer-and-papaya.html
55. Lung Cancer (2) အဆုပ်ကင်ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/lung-cancer-2.html
56. Lung Cancer and Papaya အဆုပ်-ကင်ဆာ နဲ့ သင်္ဘောရွက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/lung-cancer-1.html
57. Lung cancer therapy is milestone အဆုပ်ကင်ဆာကုသနည်းမှတ်တိုင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/lung-cancer-therapy-is-milestone.html
58. Lung cancer writings အဆုပ်ကင်ဆာစာများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/lung-cancer-writings.html
59. Milestone prostate cancer drug ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆေး သမိုင်းမှတ်တိုင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/milestone-prostate-cancer-drug.html
60. Most cancer types just bad luck ကင်ဆာနဲ့ ကံတရား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/most-cancer-types-just-bad-luck_5.html
61. Nasal cancers နှာခေါင်းကင်ဆာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/nasal-cancers.html
62. New treatment for drug-resistant breast cancer found ဆေးယဉ် ရင်သားကင်ဆာအတွက် ဆေးကုနည်းသစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/new-treatment-for-drug-resistant-breast.html
63. Nipple discharge နို့ကနေ နို့မဟုတ်တာထွက်ရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/nipple-discharge.html
64. Opiate Pain Relievers for Cancer Pain
65. Ovarian cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/ovarian-cancer.html
66. Pancreatic cancer သရက်ရွက်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pancreatic-cancer.html
67. Personal cancer vaccine research https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/personal-cancer-vaccine-research.html
68. Pills lower ovarian cancer risk ကိုယ်ဝန်တားဆေး နှင့် မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pills-lower-ovarian-cancer-risk.html
69. Smoking and Cancer ဆေးလိပ် နဲ့ ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/smoking-and-cancer.html
70. Smoking Causes 12 Different Kinds of Cancers https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/smoking-causes-12-different-kinds-of.html
71. Spinal cord injury may respond to cancer drug
72. Stomach cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/stomach-cancer.html
73. Throat cancer (Larynx cancer) လည်ချောင်းကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/throat-cancer-larynx-cancer.html
74. Thyroid Cancer သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/thyroid-cancer.html
75. Tongue cancer လျှာကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/tongue-cancer_5.html
76. Types of Brest Cancers ရင်သားကင်ဆာအမျိုးအစားများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/types-of-brest-cancers.html
77. Vaccinating against cervical cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/vaccinating-against-cervical-cancer.html
ကင်ဆာဆိုတာ ပိုက်ဆံကုန်စရာဖြစ်သည်။ ကင်ဆာဆိုတာ ပိုက်ဆံလုပ်စက်လည်းဖြစ်သည်။